पर्यटन प्रवर्द्धनको ५० लाख रुपैयाँ मदिरा पार्टीमा स्वाहा ! ::Nepali TV
You are here : Home News पर्यटन प्रवर्द्धनको ५० लाख रुपैयाँ मदिरा पार्टीमा स्वाहा !
धरानः प्रदेश नम्बर एकको पर्यट प्रवद्धनका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ बजेट मदिरा पार्टीमा स्वाहा पारिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा बिहीबारदेखि धरानमा सुरु तीनदिने ‘इस्ट टुरिजम मार्ट २०१८’ का लागि छुट्याइएको ५० लाख बजेट सहभागीहरूलाई मदिरा पिलाएर सकिएको हो ।
मदिरा पार्टीको आयोजना गर्नु गलत परिपाटी भएको भन्दै आलोचना गर्दा पर्यटन बोर्डका कर्मचारीले विगतमा पनि यस्तै गर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए । इष्ट टुरिजम मार्ट २०१८ कार्यक्रमका अध्यक्ष भविशकुमार श्रेष्ठले विदेशी पाहुनासहित २ सय ५० जनालाई मदिरा पार्टीमार्फत सत्कार गरेको बताए । उनले अतिथिहरूलाई सत्कार गरी मदिरासहितको डिनरको व्यवस्था गर्नु बजेटको दुरुपयोग नहुने जिकिर गरेका छन् ।